Sirni Awwaalcha Profeeser Mesfin WeldeMaariyaam Har’a Raawwatame
Awwaalli profeser Mesfin Weldemaariyaam Finfinnee keessatti raawwatamee jira. Profesor Mesfin gumii mirga namaa Itiyoopiyaa jedhu kan hundeessan yoo ta’u naamusa guddaa kan qaban fi hoogganoota abbaa irree biyya keessan hongee fi beela deebisee mudate ilaalchisuun ija jabummaan dura dhaabbatanii dubbachuun beekamu.
Qabsaa’ota mirga namaaf waggaa waggaatti badhaasa kennamu maqaa profeeser Weldemaariyaamiin kan qopheessu ta’uu gumiin mirga namaa Itiyoopiyaa beeksisee jira.
Yuniversitii Finfinnee keessattis giddu galli tokko maqaa isaaniitiin akka moggaasamu, maqaa isaaniitiinis waltajjiin tokko Finfinnee keessatti akka moggaasamu gaaffiin dhiyaatee jira. Sirni geggeessaa profeeser Mesfin galma Lideta jedhamuu kan Yuniversitii 6 kiiloo keessatti geggeessamee jira.
Sirna kana irratti prezidaantii Yuniversitichaa profeser Xaasoo Weldehaannaa dabalatee kanneen isaan dhiyeenyatti beekan hojii isaan Yuniversiticaaf hojjetan fi kitaabota isaan barreessan keessaa tuquu dhaan dubbataniiru. Fulbaana 19 bara 2013 du’aan boqotan.
Sirni awwaalcha isaaniis afaani yaa’iin mana maree obbo Taggesee Caafoo, ministeerotaa fi firoottan isaanii bakka argamanitti mana sagadaa Ortodoksii kidist Kateedraltti raawwatame.